हेयरड्रेसरलाई कुन उपकरण चाहिन्छ? सैलुन उपकरण हेयर स्टाइलिस्टहरूको लागि - जापान कैंची
सुन्दरता बढ्दो छ। यो उद्योगले लाखौं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिरहेको छ। यो मान्छे विश्व हेर्ने तरीका बदल्दैछ।
यो बढ्दो उद्योगमा लगानी गर्न समय र पैसा चाहिन्छ। A हेयरड्रेसिंग कम्पनी सही उपकरण र उपकरण आवश्यक छ। तपाईं अझै पनि यो उद्योग मा एक लाभ कमाउन सक्नुहुनेछ लगानी गरेर र ठूलो इनाम काटाई।
यदि तपाईं यो कोठामा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ। यी मानक उपकरणहरू र उपकरणहरू हुन् जुन तपाईंले आफ्नो कपालका सपनाहरू महसुस गर्न आवश्यक हुन्छ।
रूम कुर्साहरूको पर्खाइ
पर्खिने क्षेत्र एक सैलुनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु लाई अनवाइन्ड गर्न को लागी अनुमति दिनुहोस् उनीहरूको सेवाको लागि प्रतिक्षा गर्दा। कुर्सी बिना एक सलुन राम्रो विकल्प छैन। लामो अवधिको लागि खडा तपाइँको ग्राहकहरु मा तनाव पैदा गर्न सक्छ, जो तपाइँको आफ्नो भेटघाट स्थगित गर्न सक्छ। तपाईंले पर्खाइ क्षेत्रमा सुन्दर कुर्सीहरू, म्यागजिनहरू र संगीत पाउनुहुनेछ। यसले तपाइँको क्लाइन्टहरुलाई बस्न लालायित पार्छ। यदि तिनीहरूसँग पैसा छ भने तिनीहरू घण्टाको लागि बढी शुल्क लिन पनि तयार हुनेछन्। तपाईं आफ्नो आरामदायक पलंगहरूमा स्ट्यान्डलोन कुर्सी थप्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
एक RESEPTION DESK
रिसेप्शन डेस्क कुनै पनि व्यवसायको लागि सम्पर्कको पहिलो पोइन्ट हुन्। राम्रो हेयरड्रेसिंग सलुनसँग राम्ररी डिजाइन गरिएको रिसेप्शन डेस्क हुनुपर्दछ। राम्रोसँग डिजाइन गरिएको रिसेप्शन डेस्क आवश्यक छ। राम्रो डिजाइन गरिएको रिसेप्शन डेस्कले तपाईंलाई अधिक ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ। दृश्य अपील महत्वपूर्ण छ जब यो कुनै व्यवसायमा आउँदछ। तपाईंसँग बढि ग्राहकहरू समायोजन गर्न पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्छ। तपाईलाई चाहिने क्षेत्र तपाईको व्यवसायको डिजाइन र बजेटमा निर्भर गर्दछ।
हेयरब्रशहरू र COMBS
कपाल सैलुनमा कपाल कपालका उपकरणहरू हुनुपर्दछ, जस्तै हेयरड्रेसिंग ब्रश र कंघी। सहि आकारहरू प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहोस्। तपाईं आफ्नो बजेटमा निर्भर गर्दछ, तपाईंको आवश्यकता फिट कपाल ब्रश पाउन सक्नुहुन्छ। तपाई विस्तृत-दाँत भएको वा टेल-एन्ड कम्ब्सबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि। तपाईं वर्ग वा प्याडल ब्रशेसबाट पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
कपाल कुनै पनि सलुनमा म्याश्चराइज हुनुपर्दछ। कपाल स्टीमरहरू तपाईको कपाललाई मसिश्चराइज गर्न उत्तम उपकरण हुन्। कपाल स्टीमरहरू कपालको रंग / कपाल स्ट्रिमरको साथ लागू गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाइँले यो पनि याद गर्नुपर्दछ कि कपाल स्टीमरको धेरै आकार र मूल्यहरू छन्। तपाईं र तपाईंको बजेट को लागी सही उत्पादन छनौट गर्नुपर्दछ।
हेयर क्लिपर्स र व्यावसायिक बाल कटाई, पातलो र पाठ्यक्रम सिंचर्स
प्रोफेशनल हेयरड्रेसि sc कैंचीले तपाईंको कपाललाई विभिन्न तरीकाले आकार दिन सक्छ। प्रोफेशनल कपाल कात्ती sc.sors इन्चदेखि inches इन्च सम्म साइजको दायरामा उपलब्ध छन्। तिनीहरूले तपाईंको काटने कौशल सुधार गर्न सक्छन्। तपाईंले नोट गर्नु पर्दछ कि छोटो कात्तीहरू अधिक सटीक छन्। यदि तपाईं अधिक कुशल हुनुहुन्छ र गहन मिश्रणको आवश्यक छ भने, त्यसो भए लामो र ठूलो क्यान्सर किन्नुहोस्। तपाइँ पेशेवर क्यान्सर किन्नु अघि तपाइँको अनुसन्धान गर्नुहोस्। पर्याप्त अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ कि तपाईंसँग धेरै विकल्पहरू छन्। बजार मा धेरै ब्रांडहरु छन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं केवल सही ब्रान्डबाट मात्र खरीद गर्नुहुन्छ। ग्राहक समीक्षा समीक्षा गर्नुहोस्। विज्ञहरूको रायका लागि सोध्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सहि साइज छनौट गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं स्टिल जस्तो टिकाऊ सामग्रीले बनेका कैंचीहरू खरीद गर्नुहुन्छ। प्रोफेशनल कपाल कात्ती धेरै वर्षसम्म रहनु पर्छ।
हेयरका लागि शैम्पो बाउल
शैम्पू कचौरा दुबै कपाल धुने र कपाल कंडीशनिंगको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जब तपाईको कपाल शैम्पू गर्ने वा धुने बेला ग्राहकले आफ्नो टाउको शैम्पूको कचौरामा राख्नु पर्छ।
बाल स्टाइलिंग उपकरणहरू
त्यहाँ केश स्ट्राइटरहरू, कपाल कर्लर, र हिर्काउने ड्रायर समावेश सहित धेरै केशकावा उपकरणहरू उपलब्ध छन्। प्रत्येक एक विशेष ग्राहकहरु को स्टाइलिंग आवश्यकताहरु को लागी डिजाइन गरीएको छ। कुनै केश कपाल सैलुनको आवश्यक भाग स्टाइल कुर्सीहरू हुन्। तपाइँ तपाइँको सजावट मिलाउन विभिन्न शैली र रंगबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
म्यान्डेरी सलन हेयर टूल्स
तपाइँ कपाल अनुभवमा कत्तिको अनुभवी वा नौसिखिए पनि पर्दैन, आवश्यक उपकरणहरू छोड्न चाहनुहुन्न। यसमा लाइटवेट ब्लो ड्रायर र क्यायरको एक जोडी, प्याडल ब्रश, कपाल क्लिपहरू, एक बहुमुखी कर्लिंग फलाम, गोरा ब्रश, रेजर, र कंघीहरूको सेट सामेल छन्। यी उपकरणहरूले स्टाइल गर्ने, सेक्शन गर्ने, र स्टाइल ग्राहकहरूको कपाल सजिलो बनाए।
कुनै उपकरण खरीद गर्नु अघि यी उपकरणहरूलाई लगानीको रूपमा सोच्न महत्त्वपूर्ण छ। यो जीवनमा जोखिममा छ। जब एक समाधान हुन्छ गरीब खरीद निर्णयहरूले तपाईंको आजीविकालाई बिगार्न नदिनुहोस्। यस सूचीमा अत्यावश्यक वस्तुहरू छन् जुन तपाईलाई शीर्ष-गुणवत्ताका हेयरड्रेसि deliver सेवाहरू डेलिभर गर्न आवश्यक पर्दछ।
सबै राउन्डर कपाल कान्छीहरू
कपालका लागि सबैभन्दा सिफारिश गरिएको आकार 5.5..6.5 र .5.5.। इन्चको बीचमा हो, इच्छित परिणाममा निर्भर रहन्छ। सटीक काट्नका लागि, .XNUMX..XNUMX इन्च कतरनीले राम्रोसँग काम गर्दछ। लामो कपालहरू ठुलो टेक्स्चरि large, ठूला खण्डहरू, र कम्प्रेस्ड काटि as जस्ता ठूला कामहरूका लागि उत्तम काम गर्दछ।
लामो कतरनीसँग का comb्ग टेक्निकको लागि कैंची प्रदर्शन गर्न आवश्यक समय घटाउनुको उत्तम फाइदा हुन्छ र तपाईंलाई ग्राहकको कपाल आरामपूर्वक दाढी गर्न अनुमति दिईन्छ।
शक्तिशाली, हल्का र टिकाऊ उडान ड्रायर
हल्का तौलको ड्रायरले ग्राहकको कपाललाई स्टाइल र सीधा गर्न सजिलो बनाउँदछ। सुकाउने समयहरू बढाउन, क्षति न्यून पार्न, र कपाल / लकहरू चम्किलो र फ्रिज-रहित छोडनका लागि तपाईंले अत्याधुनिक प्रविधि खोज्नु पर्छ।
तपाई निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईको कर्लि iron्ग फलाम बहुमुखी बहुमुखी देखिन्छ विस्तृत दृश्य प्राप्त गर्नका लागि। ब्यारल कडा रि ringलेटहरू बनाउनको लागि अत्यन्त सानो हुनुहुँदैन। तपाईं लाईभ र बेंड को सही मात्रा दिन पर्याप्त आकार हुनुपर्दछ।
ग्राहकको कपाललाई ब्यारेलको वरिपरि बेर्ने बेग्लाबेग्लै तरिकाहरू प्रयोग गरी अद्वितीय कर्लहरू सिर्जना गर्नुहोस्। एक मार्सल कर्लिंग फलाम पेशेवरहरु को लागी अत्यधिक सिफारिश गरीन्छ। यसले नियन्त्रण र बिभिन्न तरिकाहरू प्रदान गर्दछ।
टेक्स्टुरि FORको लागि रेजर, नेभ / नेप र भाँडो बटुल्दै
यो अचम्मको उपकरण उपयोगी छ र चाँडै प्रभावशाली संरचना छिटो सिर्जना गर्दा कपाल हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक्सचेन्जेबल ब्लेडको साथ एक उच्च-गुणवत्ता रेजर एक उत्तम विकल्प हो यदि तपाईं एक प्राकृतिक हेराई चाहनुहुन्छ भने। तपाईं टेक्स्चराइजिंग, स्ट्रेट-रेजर कटि and र यस प्रकारको रेजरको साथ धेरै सजिलो मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ। एर्गोनोमिक फिंगर डिजाईनले प्राकृतिक र आरामदायी स्थितिमा तपाईको हात राखेर तनाव कम गर्दछ। यो सुविधा विचार गरिनु पर्छ जब तपाईं आफ्नो अर्को रेजर खरीद।
सर्वश्रेष्ठ केश कम्बस
सहि कंघी सफा सेक्सनमा कपाल वा स्टाइल गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं पनि क्लिपर-ओभर कंघी र सिजर-ओभर कंघी प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कपाल अलग गर्नका लागि।
बहु-कंघी कंघी जुन लामो, सर्टकट, व्यापक काट्ने र पुच्छर काटनेको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ यसले सबै आधारहरू कभर गर्न सजिलो बनाउँदछ। हल्का र गाढा कपाल बीच भिजुअल कन्ट्रास्ट अधिकतम बनाउन हात्तीको दाँत वा कालो रंगहरू छनौट गर्नुहोस्। पेशेवर कंघी पनि ग्रेफाइट रेजिन र कार्बन फिल्टरको साथ बनाउनु पर्छ। तिनीहरूले एक मिठो ग्लाइड प्रस्ताव र 450 ° एफ को मा गर्मी को सामना गर्न सक्छन्।
क्लिपहरू सेक्शन गर्दै
सेक्शनि clip क्लिप तपाईंको सलुनमा पनि आवश्यक छ। तपाईं सेक्शनिंग क्लिपहरू काट्न, स्टाइल गर्न, र कूल ग्राहकहरूको कपाल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू धेरै आकार र शैलीहरूमा आउँदछन्। विज्ञहरूले सिफारिस गर्छन् कि तपाइँ क्लिपहरू छनौट गर्नुहोस् जसले अधिकतम ग्रिपिंग प्रदान गर्दछ, विशेष गरी सुख्खा कपालका लागि। तपाईं कपाल सुक्खा को अधिक विस्तृत वर्गहरु काट गर्न सक्षम हुनेछ। क्लिपहरू हेर्नु उत्तम हुन्छ जुन छोड्ने मार्कको प्रवण हुँदैन, विशेष गरी जब तपाईं प्रिस्टाइन अप स्टाइलहरू सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ।
ड्राई सेक्शनिंग क्लिपहरू उत्कृष्ट हुन् किनभने ती दुवै भिजे र सुख्खा कपालहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरू पनि क्रीज र ड्राई एयरलाइन्स कम गर्नका लागि उत्कृष्ट छन्।
सबै कपालमा पानीको बोतल हुनु पर्छ। तपाईले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि पानीको बोतल तपाईका हातहरुमा पूर्ण रुपमा फिट छ यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईं कपाल फवारन र संतृप्ति गर्दै हुनुहुन्छ। आधुनिक पानीको बोतलहरूमा निरन्तर स्प्रे र विस्तारित स्प्रे गर्ने क्षमता हुनुपर्दछ।
गोल हेयर ब्रश
एक महान गोल ब्रश एक को लागी आवश्यक छ व्यावसायिक कपाल। एक गोल ब्रशले तपाईंलाई निर्दोष ब्लाउआउट्स गर्न अनुमति दिनेछ। तपाईं आफ्नो ब्रश को आकार को बारे मा सावधान हुनु पर्छ। त्यहाँ तीन प्रकारका छन्: यी हुन्:
सानो ब्यारेल प्रकार - यदि तपाईको छोटो कपाल छ भने, एक सानो ब्यारेल पर्याप्त हुनेछ।
मध्यम ब्यारेल प्रकार - यसको विपरित, एक मध्यम आकारको ब्यारेल बेस पूर्णता सिर्जना गर्न चाहनेहरूको लागि आदर्श हुनेछ
ठूलो ब्यारेल प्रकार - यदि तपाईं लामो, सीधा, लूज हेराई चाहनुहुन्छ भने, ठूलो ब्यारेल राम्रो विकल्प हो।
एक गोल ब्रश हेयरड्रेसिंगको लागि एक शक्तिशाली उपकरण हो जुन राम्रो कपाललाई रूपान्तरण गर्न सक्दछ। यसले तपाईंको कपाल फुलर र अधिक बाक्लो देखिन्छ। डुar्गा र नायलन ब्रस्टलको साथ गोल ब्रशहरू हेर्नुहोस् जब एकको लागि किनमेल गर्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई अधिकतम भोल्यूम र चमक दिन्छ।
प्रोफेशनल हेयरसिंग कान्छीहरू साझेदारी गर्दै
तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु लाई व्यावसायिक कपाल काट्न को लागी सक्षम यदि तपाईं तेज कैंची छ। तपाईंले आफ्नो कैंची तिखार्नु पर्छ र तिनीहरूलाई कायम राख्नु पर्दछ। सुधारिएको दक्षता, विश्वसनीयता, स्थायित्वको लागि तपाईंको हेयरड्रेसि sc क्यान्सरमा तेल लागू गर्न सफा कपडा प्रयोग गर्नुहोस्।
के प्रोफेशनल हेयरिंग गर्ने क्यान्सरहरूले तपाईंलाई किन्नुहोस्
यो उत्तम हेयरड्रेसिंग कैंची प्राप्त गर्न सजिलो छ। तपाईका ग्राहकहरू नतिजाको साथ खुशी हुनेछन्। यसले तपाईंलाई लामो समयको लागि ती भव्य किनारहरू सुरक्षित गर्न अनुमति दिन्छ।
हेयरड्रेसि sc कैंची कसरी छनौट गर्ने बारेमा थप पढ्नुहोस् यहाँ!
तपाईं सही कात्ती छ भने तपाईं एक कपाल को रूप मा आफ्नो सबै भन्दा राम्रो गर्न सक्षम हुनेछ। तपाईं सबैभन्दा सुन्दर हेयरस्टाईल र कटौतीहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। सर्वप्रथम, तपाईले कुन शैली र प्रविधिहरूमा रुचि राख्नु हुन्छ तपाईले निर्णय गर्नु पर्छ।
तपाईं आफ्नो कपाल काट्ने आवश्यकताहरूको लागि सही आकार र आकार छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। जापान कैंची अष्ट्रेलिया कपालका विभिन्न आकार प्रदान गर्दछ, 4.5. size इन्चदेखि inches इन्च आकारको। पछिल्ला केही वर्षहरूमा दुबै कपाल र नाईहरूले 7..5.5-इन्च र-इन्च कैंची प्रयोग गरेको छ।
यो किनभने 4.5.- देखि 5.5..6 इन्चको कैंची अधिक सटीक हुन्छ र कपाल काट्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रोफेशनल नाइकेले over देखि-इन्च लामो कपालहरू दुबै ओभर-द-कंघी र साधारण ट्रिमको लागि प्रयोग गर्दछ।
उत्तम हेयरड्रेसिress कैंचीको लागि किनमेल गर्दा सही आकार छनौट गर्नु सधैं उत्तम हुन्छ। तपाईले आकार छनौट गर्नुपर्नेछ जुन तपाईंलाई धेरै सहज लाग्छ।
ब्लेड तपाईको बीचको औंलाको बिरूद्ध मापन गर्नु पर्छ। प्रमाणित गर्नका लागि कि कैंची फिट छ, तपाईको बीचको औंला बिरुद्द ब्लेड को लम्बाई मापन गर्नुहोस्। धेरै केश प्रविधिको लागि, is. and र inches इन्चको बीच मापन क्यान्सर उत्तम हो। सहि आकारले तपाईंको मनलाई र हातहरूमा तनाव कम गर्दछ।
उत्तम कैंची आकार छनौट गर्ने बारेमा थप पढ्नुहोस् यहाँ!
निष्कर्ष: केशिंगि asको रूपमा काम गर्न तपाईलाई कुन उपकरणहरू आवश्यक पर्दछ?
तपाईं अब एक पेशेवर कपाल हुनुहुन्छ। यो स्पष्ट छ कि यो तपाईंको लागि सही कपाल उद्योग हो। बधाई छ! यो उद्योग अत्यधिक सम्मान र संवृद्धि हो। यो उद्योग अत्यधिक आकर्षक छ र धेरैले लगानी गरेका छन्। सही उपकरण र उपकरणहरूमा लगानी गर्न यो आवश्यक छ। यो लेखले तपाईंलाई एक सफल कपालका कारोबार शुरू गर्न आवश्यक पर्दछ।
के तपाईसँग केश हेयरिंग पसल खोल्ने योजना छ? यी आवश्यक उपकरणहरू हुन् जुन तपाईंले आफ्नो नयाँ क्यारियर शुरू गर्नुपर्नेछ। हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू सूचीबद्ध गरेका छौं जुन प्रत्येक कपालमा हुनुपर्दछ। तपाईलाई कपालको क्यान्सर र ब्रशेस, कम्बिज, र कपाल स्टाइलिंग स्टेशनदेखि सबै चीज चाहिन्छ आवश्यक उपकरणहरू तपाईंलाई चाहिन्छ।
यहाँ तपाईंले हेयरस्टाइलिस्टको रूपमा काम गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको सारांश सूची छ!
१. काट्ने उपकरण
कैंची र कपाल क्लिपरहरू उपकरणहरू हुन् जुन प्रत्येक केश स्टाइलिस्टलाई चाहिन्छ। यदि तपाईं कपालका स्कूलमा पढ्नुभयो भने तपाईं प्रत्येक उपकरणको कार्यहरूसँग परिचित हुनुहुनेछ। पातलो कैंचीमा नचहरूले तपाईंलाई लम्बाइ काट्नु बिना अधिक मोटाई हटाउन अनुमति दिन्छ। रेजरलाई आकार दिन लेयर र आकार हेयरस्टाइलहरू सिर्जना गर्न सक्दछ, जबकि क्लीपरहरू कपाल कपाल गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
2. ब्रश र कपाल कंघी
तपाईं एक ग्राहकको कपाल मात्र कैंची र कपाल क्लिपरको साथ शैली गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं अन्य कपाल काट्ने तरिकामा विभिन्न प्रकारका ब्रश वा कंघी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ धेरै आकार र ब्रशेस आकारहरू छन्: वर्ग, गोलाकार, प्याडल, स्मूइ .्ग भेंट, चौडा-दाँत, छेड्ने, थर्मल, नियमित, र वर्ग। कम्बिजका लागि त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्: दुई-पुच्छर, मुसाको पुच्छर, पुच्छरको अन्त्य र चौडा दाँत।
Professional. पेशेवर कपाल उत्पादनहरू
सेरमहरू, मौस, हेयरस्प्रे र अन्य हेयरस्प्रे उत्पादनहरूका धुवाँले केशको लम्बाइ बढाउन सक्छ। त्यहाँ धेरै ब्रान्डहरू छनौट गर्न छन् जुन तपाईंको केशलाई स्थानमा राख्नेछ, यो भारी हुन सक्छ। तपाइँको आवश्यकता र चाहना अनुरुप एक पाउन तपाई विभिन्न ब्राण्ड को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ।
Fla. फ्ल्याट फलाम, कपाल कर्लर, र कपाल छडी
यी तीन उपकरणले सुस्त, अप्रिय कपाललाई केहि राम्रो चीजमा रूपान्तरण गर्न सक्दछन्। फ्ल्याट फलामले लगभग कुनै पनि शैली गर्न सक्दछ, कपाल वा घुमाउरो कपाल। यदि तपाइँको क्लाइन्टले चिरस्थायी कर्लहरू चाहानुहुन्छ, तपाइँ कर्लि opt उपकरणको लागि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै कपालको कर्लर वा छडी।
Hair. हेयर ड्रायर
एउटा नम कपाल तपाईको सपाट इस्त्रीहरू, कर्लरहरू, वा डण्डाहरूसँग प्रयोग गर्न सकिँदैन। तपाईंले यसलाई सुकाउनु पर्छ। हेयर ड्रायर एक उत्तम उपकरण हो। हल्का र शक्तिशाली हेअर ड्रायरहरू तपाइँको ग्राहकहरूको कपाल सुक्न लामो समय लिँदैन। तपाईं कुनै फ्लैट इरानहरूको साथ अनौंठो शैलीहरू सिर्जना गर्न यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Ha. हेयरड्रेसरको लागि कुर्सी
तपाईंको ग्राहकहरु एक कपाल कुर्सी मा सहज महसुस गर्नेछन्। कपालको कुर्सीसँग धेरै सुविधाहरू छन्, यसका डिजाइन, रंग, प्याडि।, र सुविधा सहित। कपालको कुर्सीको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता स्टाइलिस्टको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सजिलै माथि र तल सर्नको क्षमता हो।
Ha. कपालका लागि स्टेशन
तपाईंको सलुन हेयरस्टाइल स्टेशनहरू बिना पूर्ण हुँदैन। तपाईं पर्याप्त स्टोरेज र एक मिररको साथ हेयरस्टाइल स्टेशनहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको सबै सुन्दरता उत्पादनहरू समात्नेछ। यदि तपाईंसँग सीमित बजेट छ भने, तपाईं सानो डेस्क छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको भित्तामा ठूलो ऐनामा संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ।
यी केवल केही आवश्यक उपकरणहरू हुन् जुन तपाईं आफ्नो उपकरण बक्समा हुनु पर्छ। तपाईंलाई अधिक उपकरणहरू चाहिन्छ, जस्तै कपाल क्लिपहरू, ग्लोभहरू, कपाल रोलरहरू, ग्लोभहरू र मिक्सिंग कचौराहरू। तर यी अत्यावश्यक चीजहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो हेयरस्टाईल क्यारियरमा सुरु गर्नुपर्दछ। तपाईंले आफ्नो प्रशिक्षण पूरा गरिसकेपछि, यो समय खरीदको लागि उपकरणहरूको लागि हो कि तपाईंलाई आफ्नो हेयरस्टालिंग क्यारियर सुरु गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरक्षित काम र सैलुनको बारेमा अधिक पढ्नुहोस् यहाँ!
यो विस्तृत सूचीको प्रकार हो जुन कुनै पनि इच्छुक कपालले समीक्षा गर्नु पर्छ। कुनै पनि व्यवसाय उद्यम जस्तै, व्यक्ति जहिले उपकरणमा लगानी सम्म सम्बन्धित सबै कुरा महसुस गर्दैनन्। यस लेखले तपाईंलाई रिसेप्शन डेस्कबाट कपाल काट्ने कपालमा कपालका केश स्टाइलिस्टहरूको लागि उपकरण र उपकरणहरू चाहिएको सबै कुरा उल्लेख गर्दछ।
म मेरी प्रेमिकासँग फोनमा थिएँ र हामी के गरिरहेको थियौं कि यो तपाईंको कपाल पूरा भइरहेको जस्तो छ। हामी हेयरड्रेसरले प्रयोग गर्ने सबै उपकरणहरू बारे कुरा गर्दै थियौं र साना चीजहरू तपाईले कहिल्यै विचार गर्नुहुन्न जस्तो कि तपाईंको क्यान्सर पेशेवर बनाउनु पर्छ। म उसलाई हेयरस्टाइलिस्टहरूको लागि आवश्यक उपकरणहरू र उपकरणहरूको सूची देखाउँदै छु किनभने त्यहाँ हामीले सोचे भन्दा धेरै छ। अवश्य पनि, त्यहाँ केश कैंची (र सबै बिभिन्न प्रकार) का चीज छन्, तर यो केवल सुरूवात हो। कपाल स्टीमरहरू, धुने कचौरा ... सूची जारी छ र अगाडि बढ्छ।